Dagaal kharaar oo u dhexeeya Al-Shabaab iyo Ahlu Sunna oo ka socda Galguduud. – Radio Daljir
Dagaal kharaar oo u dhexeeya Al-Shabaab iyo Ahlu Sunna oo ka socda Galguduud.
Abriil 20, 2010 12:00 b 0
Ceeldheer, Apr 20 – Iyadoo afhayeen Xarakada shabaab al-mujaahidiin Sh, Cali Dheere uu maanta ka sheegay magaalada Muqdisho inay qabsadeen deegaanada Galcad iyo Masagawaa oo labaduba ka tirsan gobolka Galguduud ayaa arrintaasi waxaa si kulul u beeniyey gudoomiye ku xigeenka golaha fulinta ee Ahlusunna Sh, Cumar Cali.
Dagaalka ayaa hadda waxaa uu si kulul uga socdaa tuulooyin ka tirsan degmada Ceeldheer ee gobolkaasi Galguduud, waxaana uu sheegayaa wariye ka tirsan idaacadda Daljir oo jooga gobolka inaan ilaa hadda la caddeyn khasaaraha, balse warar madaxbanaan ayaa sheegaya in dagaalku uu geystay khasaare dhimasho iyo dhaacba leh.
Dagaalka ayaa la isu adeegsanayaa hubka culus, waxaana uu bilawday markii ay ciidamada Shabaabku ku duuleen goobahaasi oo ay horay gacanta ugu hayeen ururka Ahlusunna.
Gobolka Galguduud ayaa ah meesha ugu badan ee ay labadaan dhinac ku dagaalamaan, waxaana ku dhintay boqolaal ruux oo isugu jira dhinacyadii dagaalamay iyo shacab ay rasaas habaw ahi sii qaadatay.